Fampitomboana kely sy lehibe amin'ny famokarana Apicmo cdmo Manufacturers
Our Services > Famokarana kely sy lehibe
Nandritra ny folo taona farany, APICMO dia nanome fitaovana manokana sy fanodinana manokana. Ny haavon-tsaintsika dia afaka mifandanja amin'ny sombin-tsakafo madigrama ho an'ny serivisy fanontam-pirinty lehibe.
Ny ankamaroan'ny mpanjifanay dia hita any Amerika Avaratra, Eoropa, Aisa, anisan'izany ny Pfizer, lilly, roche, GSK, MSD, bayer ary orinasa hafa malaza.
Ny fampiasana ny fomba amam-panao sy ny fananganana an-tsoratra rehetra dia atao ao anatin'ny fehezan-dalàna mifehy ny tsiambaratelo. Ny ekipa ao amin'ny tetikasa tafiditra ao anatin'izany dia tohanan'ny vondrona matihanina matihanina sy matotra. Miasa miaraka amin'ny rivodoza miaraka amin'ny elanelam-pandrefesana avy amin'ny -100˚C hatramin'ny 300˚C, ary mizana manomboka amin'ny 5L mankany 5000L, ny sandany dia atolotra amin'ny mpanjifa amin'ny alalan'ny fampiasana fitaovam-pifandraisana an-tariby (faran'ny metric ton) fanafody pharmaceutika. Ny famokarana dia tanterahina ao amin'ny toeram-pamokarana misy antsika.
Mampifanaraka ny rindram-baiko ho an'ny famokarana simia izahay mba hihaona amin'ireo tetikasa manokana izay misy safidy sy haingam-pandeha tsara indrindra raha manaraka ny fenitra ambony indrindra momba ny fiarovana sy ny fanarahan-dalàna. Ny dingana famokarana maimaim-poana dia ahafahana mamaritra loko matevina sy manatsara ny vokatra. Ny dingana rehetra dia natao mba hametrahana fenitra fitsipika henjana.